नेपाली सूर्य – ताजा समाचार, ज्ञानगुन तथा मनोरञ्जनको लागि पलपलको सहयात्री
July 2, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on पार्टी घोषणाको सातौं दिनमै वामदेव गौतम निष्कासित !
काठमाडौं । नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानमा आवद्ध चार दलले संयोजक वामदेव गौतमलाई निष्कासन गरेको छ । अभियानमा आवद्ध समाजवादी केन्द्र नेपाल, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा (राष्ट्रवादी), आम नेपाली पार्टीका शीर्ष नेताको बैठकले ५ बुँदे आरोप लगाउँदै गौतमलाई निष्कासन गरेको नेता युवराज सफलले जानकारी दिए । गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानले ११ असारमा ललितपुरको […]
June 30, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on गगन थापाले डा. शेखर कोइरालाको गुट छाडे
काठमाडौं, १६ असार । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले डा. शेखर कोइरालाको गुट छाडेका छन् । उनी पछिल्लो समय शेखर गुटको भेलामा जान छाडेका छन् । आज वत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा भएको शेखर गुटको भेलामा पनि गगन देखिएनन् । थापा शेखर कोइरालाको समूहबाट महामन्त्री निर्वाचित भएका थिए । तर, पछिल्लो समय उनी बुढानिलकण्ठसँग पनि नजिकिएका छन् […]
June 27, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on दिलमाया सुनार मृत्यु प्रकरण : शुक्रबार राति सँगै सुतेको श्रेष्ठले स्वीकारे
असार १३, काठमाडौँ गायिका दिलमाया सुनारको मृत्यु भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि उनको मृत्युको कारण भने अझै खुल्न सकेको छैन् । सुनारको मृत्यु, हत्या वा आत्महत्या के बाट भएको हो भन्ने प्रहरीले टुंगो लगाउन सकेको छैन् । यद्यपी सुनारको घाँटीमा निलोडाम देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका सुर्य श्रेष्ठले शुक्रबार राति दिलमायासँगै […]
June 27, 2022 June 27, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on दिलमाया मृत्यु प्रकरणमा सूर्यको बयान : रक्सी पिएर सुतेका थियौँ त्यसपछि…
दिलमाया मृत्यु प्रकरणमा सूर्यको बयान : रक्सी पिएर सुतेका थियौँ त्यसपछि… लोक गायिका दिलमाया सुनारको रहस्यमय मृत्यु प्रकरणमा जोडिएका सूर्य श्रेष्ठले आफूले हत्या नगरेको बयान दिएका छन्। शनिबार बिहान ११ बजे नेपालटारस्थित कोठामै दिलमाया रहस्यमय अवस्थामा मृत भेटिएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका उनले सुरूदेखि नै दिलमायाको हत्या नगरेको बयान दिइरहेका छन्। सूर्यले […]
June 27, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on फोहोर माग्दै वडाध्यक्ष टोलटोलमा
सिरहा — लहान नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या बर्सेनि बल्झिरहन्छ । फोहोर नउठाएको भन्दै पटकपटक स्थानीयले नगरपालिका कार्यालय घेराउ गर्दै आएका छन् । गत वर्ष डम्पिङ साइट विवादका कारण बजार क्षेत्रको फोहोर १८ दिनसम्म नउठाएको भन्दै स्थानीयले पालिका कार्यालय परिसरमा फोहोर फालेका थिए । नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र वडा नम्बर ७ मा पर्छ । यो क्षेत्रमा बर्सेनि फोहोरकै समस्या र […]
ओली प्रति अत्यन्तै सम्मान छ – झाँक्री
June 27, 2022 June 27, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on ओली प्रति अत्यन्तै सम्मान छ – झाँक्री
मन्त्रालयको बिदाई कार्यक्रममा रुँदै बाहिरिनुभयो । त्यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा झाँक्रीले आफूले ६ महिनाको लागि मात्रै मन्त्री बन्छु भनेर पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सही छाप गरेर मन्त्री नबनेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । मन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगत्तै प्राइम टिभीको चर्चित कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छनको लागि पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले समाजवादी […]
एकीकृत समाजवादीको सदस्यता छैन, एमाले नै हुँ – रामकुमारी झाँक्री
June 27, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on एकीकृत समाजवादीको सदस्यता छैन, एमाले नै हुँ – रामकुमारी झाँक्री
काठमाडौं, असार १३ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले सहरी विकास मन्त्रीका रुपमा ८ महिना २० दिन काम गरिन् । आइतबार राष्ट्रियसभामा मन्त्रालयगत बजेटबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिएपछि उनले मन्त्रालयबाट विदा लिइन् । त्यसको केहीबेरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे, जसमा एकीकृत समाजवादीको सिफारिस अनुसार झाँक्रीको ठाउँमा मेटमणि चौधरी सहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । […]
पतिसँग डिभोर्स भएपछि एक्लै बसिरहेकी गायिका दिलमायाको कोठाबाट मध्यराती फर्किएका युवक को हुन् ?
June 26, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on पतिसँग डिभोर्स भएपछि एक्लै बसिरहेकी गायिका दिलमायाको कोठाबाट मध्यराती फर्किएका युवक को हुन् ?
लोक दोहोरी गायिका दिलमाया सुनार आफ्नै कोठामा मृ’त फेला परेकी छिन् । सुर्खेत घर भई हाल काठमाडौंको नेपालटारमा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएकी सुनार शनिबार आफ्नै कोठामा मृ’त भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । गायिका दिलमायाले शुक्रबार राति आफूलाई बाँच्न गाह्रो भएको भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेकी थिइन् । सुनार लाइभ दोहोरी गायनमा बढी सक्रिय थिइन् । […]
June 26, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on बिदाइ कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीका आँसु रोकिएनन्
काठमाण्डाै – राजीनामा दिन लाग्नुभएकी सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री निकैबेर रुनुभएको छ । आज आइतवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनसँगै मन्त्रीको बिदाइको कार्यक्रम राखिएको थियो । बिदाइ कार्यक्रममा मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्री झाँक्रीले गरेका कामको विवरण सुनाइरहँदा मन्त्री झाँक्री भने निकैबेर रुनुभएको छ । उहाँले पटक–पटक टिस्यु पेपरले आँसु पुछ्नुभएको छ । यसअघि मन्त्री झाँक्रीले बालुवाटार पुगेर […]
June 26, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on मन्त्री झाँक्रीले दिइन् राजिनामा
काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि पदबाट राजीनामा दिने भएकी छन् । राजीनामाबारे जानकारी दिन केही बेरमै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । विनियोजन विधेयकबारे आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको संसदमा जवाफ दिए लगत्तै झाँक्रीले राजीनामा घोषणा गर्न लागेकी हुन् । आजै पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई राजीनामा बुझाइसकेका छन् । […]
क्याप्टेनसहित २३ जना सवार नेपाली सेनाको बस दुर्घटना (26,508)
बाउले खुदो बेचेर पढाएका ६ छोराहरु: दुई भाई सिडियो, ४ भाई हाकिम (17,514)
भुपेन्द्र ह’त्या बारे ड’रलाग्दो खुलासा, प्रेमीकाले मा’र्न सुपारी दिएको रहेछ (हेर्नुहोस भिडियो) (15,794)
हे भगवान यो के भयो, ८ महीने बच्चा बोकेर गोर्खा देखी रुदै सबीना आइन इन्द्रेनीमा-भिडियो हेर्नुहोस (14,000)
श्रीमतीको जन्मदिनमा मदनकृष्ण श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे मनै रुवाउने यस्तो गीत (भिडियो) (12,578)
May 25, 2022 Nepali Surya
मंगल ग्रहमा भर्खरै भटिएको रहस्यले बैज्ञानिकहरुलाई सोच्न बाध्य बनायो
अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथी रुसी राष्ट्रपतिको टिप्पणीले तरंग
February 2, 2022 February 2, 2022 Nepali Surya